Nepal Dayari | तिमीले मेरो किन चित्त दुखायौ ? यस्तो भन्दै बिनाले बनाएकी रैछन् भिडियो (भिडियो हेर्नुस्)
तिमीले मेरो किन चित्त दुखायौ ? यस्तो भन्दै बिनाले बनाएकी रैछन् भिडियो (भिडियो हेर्नुस्)
असार ३०, २०७८ बुधबार ५१५ पटक हेरिएको
चितवनकी बिना सापकोटालाई प्रहरीले खोजी जारी राखेको छ । प्रेमीसंग मोटरसाइकलमा संगै निस्केकी विना त्यसपछि घर फर्केर आइनन् । उनका प्रेमीले पनि चौविसकोटीवाट विना कता गइन् आफुलाई थाहा नभएको बताएका छन् । उनका प्रेमी भनिएका युवक अहिले पक्राउ परेका छन् । बिनालाई आफ्ना प्रेमी अर्की युवतीसंग पनि नजिकिएका छन् भन्ने आशंका थियो । यो कुरा अहिले उनका परिवारका सदस्यहरुले भिडियोमा दिएको अभिब्यक्तिवाट पुष्टि हुन्छ ।
विनाका आमा लगायत उनका परिवारका सदस्य ति अर्की युवतीको घरमा पनि कुराकानी गर्न गएको अघिल्लो एक भिडियोमा बताएका छन् । उनीहरुले यो घटनामा आफुहरुलाई सामेल नगराउन भनेका छन् । आफ्नो घरमा प्रवेश समेत नदिएको भन्दै विनाको आमाले हामी कुराकानी गर्न आएका हौँ म विनाको आमा हो भनेपछि मात्र आफुहरुलाई घर भित्र प्रवेश गर्न दिएको बताएकी छन् ।